January 26, 2020 १२ माघ २०७६
Thursday, 1 Aug, 2019 3:33 PM
नगरपालिले समृद्धिको लागि विभिन्न विकासका योजना बनाएका छन् । केही कामहरु अगाडि बढेका छन् । पछिल्लो समय चर्चामा रहेको दमक नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा सडकलाई राखेको छ । नेपालकै ठुलो भ्यु टावर, विश्वकै अग्लो बुद्धको मुर्ति स्थापनाको कुराले समेत दमक नगरपालिका चर्चामा छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट दुईबर्षको समयभित्र के कस्ता उपलब्धी हासिल भयो त् ? दमकको समग्र विकास र आगामी योजनाका बिषयमा चक्रपथ डटकमका दिनेश घिमिरेले दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता पौडेल अधिकारीसँग गरेको कुराकानी ।
दुईबर्षको समयअवधीमा दमक नगरपालिकामा जनताले देख्ने गरि के के काम भए ?
संविधान जारी भए पश्चात स्थानिय तहको निर्वाचन भयो । आम मानिसले पनि स्थानिय तहलाई राज्यको एक महत्वपूर्ण अंगको रुपमा लिनुभएको छ । पहिलो बर्ष हामी स्थानिय तहमा भर्खरै मात्र गएका थियौ, त्यो बर्ष अलि च्यालेन्जिङ पनि थियो । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक भएको उक्त निर्वाचन एतिहासिक पनि थियो । नागरिकहरुका आफ्ना दैनिकी समस्याहरुदेखि विकास निर्माणका कामहरु, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु, अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु सुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले हामी निर्वाचित भएर स्थानिय तहमा गएसँगै जनताका अपेक्षा अनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाएर अगाडी बढ्यौं । त्यतिबेला हामीले संविधान अनुशार विद्यायिकी अधिकार भित्र रहेर ऐन कानून निर्माण गर्नुपर्ने नियमावलीहरु बनाएर जानु पर्ने भएकाले केही चुनौती थियो । स्थानिय तहमा प्रत्येक वडा कार्यलयहरु स्थापना गरेर वडाबाटै सेवा प्रभाह गर्ने काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । ती सबै कुराहरु मिलाएर यत्तिखेर भने हामीले जनताको घर दैलौमै सेवा दिइरहेका छौ । जनातालाई सिंहदरवारका कामहरु स्थानिय तहबाटै सम्पादन गरेर स्थानिय तहमा नै हाम्रै सरकार छ है भन्ने अनुभूति र महशुस गराउने कार्य गरिरहेका छौ ।
किशोर किशोरीलाई संरक्षण दिने गरेका छौ भन्नुभयो यो कसरी भइरहेको छ ?
दमक नगरपालिकाले ‘सेफ हाउस’ संचालन गरेको छ । अलपत्र अवस्थामा परेका महिला दिदीबहिनीहरुलाई हामी सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छौ । अहिले म काठमाडौंमा छु हिजोमात्र पनि एक जना वालिका असुरक्षित छिन् भनेर खबर आयो । उहाँलाई ‘सेफ हाउसमा’ ल्याउने काम भयो । हामी उहाँलाई काउन्सीलिङ्ग गर्छौ र ११ कक्षासम्म निशुल्क पढाउने व्यवस्था गछौं ।
सेफ हाउसमा राख्ने कुरा एउटा भयो, हिंसा न्यूनिकरणका लागि चाँहि के कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् ?
मेयरले जस्तो उपमेयरलाई जिम्मवारी दिइएको छैन्, मेयर नै सबै अधिकार प्राप्त व्यक्ति हो भन्दै कतिपय नगरपालीकाहरुमा मेयर र उपमेयर बीचको असमझदारी भइरहेको देखिन्छ के छ तपाईहरुकोमा ?
कतिपय ठाउँमा मेयर र उममेयरका बीच भएका टसलहरुबारे मैले पनि सुन्न र पढ्न त पाएको छु तर हाम्रो दमकमा भने त्यस्तो समस्या छैन । हामी एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आएका हौं । उपप्रमुखको आफ्नै जिम्मेवारी छ । नगरप्रमुखको आफ्नै जिम्मेवारी छ ।
महिलाको पहिचान भनेको उपप्रमुख मात्र बन्ने हो जस्तो देखियो, के महिला उपप्रमुख मात्र हुन की प्रमुख पनि बन्ने हिम्मत राख्छन् ?
सरकारको लक्ष्य ‘सम्वृद नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियान पुरा गर्न के गर्नुपर्छ ?
दुई तिहाईको सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने खालका टिप्पणी पनि आइरहेको छ, तपाईलाई के लाग्छ सरकारले काम गर्न नसकेको नै हो त ?
त्यसो होइन, यो सकारात्मक आलोचना हो । जस्तो काम गरिराछौ काम गर्ने मान्छे कै आलोचना हुन्छ नी त । नगर्ने को त के आलोचना गर्ने ? काम भइराछ । काम देखिएको छ । स्थानिय तहले काम गरिराछ । संघले प्रदेशहरुले पनि आ आफ्नो काम गरिराखेका छन् । होला, बीचमा केही अन्योल । हामीले एकैपटक संविधान जारी ग¥्यौ, लागू ग¥यौं, स्थानिय तहको निर्वाचन गर्यौं, संघ र प्रदेशको निर्वाचन ग¥यौ । राज्यको जुन संरचना छ, त्यो संरचनाहरु अघि बढिरहँदा पक्कै पनि केही चुनौतीहरु भए, ती चुनौतीहरु सामाना गदै जाँदा केही अप्ठ्याराहरु पनि आए तर यो अब अगाडी बढिसक्यो । यही सरकारका पालामा सम्वृद्धी हासिल हुन्छ । पुर्णरुमा नभएपनि सम्ंवृद्घिको एउटा बाटो बन्छ । सिस्ट्म अगाडी बढ्छ । हामीले अहिले जति दुख पाएका छौ नी, सिस्टम बसाउनका लागि हो । जस्तै ऐन बनाउनु पर्ने, नीति नियम बनाउनु पर्ने, नियमावली बनाउनु पर्ने हरेक क्षेत्रमा जानु पर्ने जुन जनअपेक्षाहरु छ, एकैपटक भयो क्या । १७ बर्षसम्म जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्था एकै चोटी जनअपेक्षा यत्तिधेरै चुलियो त्यसलाई विस्तारै हामीले पुरा गर्दै अगाडी बढिरहँदा हामीले यही सरकारको पालामा सिस्टम बसाल्छौ र सम्वृद्धिको खाका कोरेर अगाडि बढ्न सक्छौ भन्ने चाँही मलाई विश्वास छ ।
मुल्याङन नगरी धरै छैन । हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षहरु महिला हुनुहुन्छ । उहाँहरुको जिम्मेवारी धेरै छ उहाँहरुले कार्यकारीणी तथा न्यायिक कामहरु गरिदिनुभएन भने त्यहाँ अन्यौलता सृजना हुन्छ । त्यसकारण पनि अब महिलाहरुको कामको मुल्याङन हुनै पर्छ । महिलामा क्षमता रहेछ, महिलाहरु इमान्दार हुँदा रहेछन् । राज्यको स्रोत र साधनको इफेक्टिभ तरिकाले बाँडफाड र परिचालन गर्ने सवालमा सक्न रहेछन् है भन्ने कुरा त प्रमाणित नै भइसक्यो नी । किनकी राजस्व परामर्श समितिको संयोजक नै उपप्रमुखहरु हुनुहुन्छ । बजेट तथा नीति कार्यक्रमको तर्जुमा समितिको प्रमुख नै उपप्रमुख हुनुहुन्छ । सदनमा वा नगरसभामा बजेट देखि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने काममा अहंम् भूमिका हुन्छ । त्यसो हुँदा अब उपप्रमुखहरुको क्षमतामा प्रश्न उठाउने कुरा वा महिलाहरुले गर्न सक्नु हुन्न भन्ने कुरा अब रहदैन ।